Maxkamadda socdaalka oo diiday go’aankii sharcigga loogu diiday haweeney 106 aheyd | Somaliska
Maxkamadda laanta socdaalka ee ku taala magaaladda Göteborg ayaa diiday go’aan horey laanta socdaalka ay ku gaartay in dalka laga musaafuriyo haweeney u dhalatay wadanka Afgaanistaan oo 106 ah islamarkaasina loo diiday ineey dalkaan ka hesho deganaan.
Haweeyneydan oo markii sharciga loo diiday u dacwooda maxkamadda socdaalka, waxaana maxkamadu aqbashay codsiga haweeneydaasi kuna hakisay go’aankii musaafurinta ah ee la siiyey. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay naxdin argagax aragto falka diidmada ah ee haweeyneydaasi la siiyey islamarkaasina ay tahay qof da’a ah.
Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in markii ay eegtay xaaladda caafimaad ee haweeneydaasi iyo xaaladaha amaanka ah ee ka jira Afgaanistaan laa shaashay go’aankii diidama ahaa. Haweeyneydan oo dalka Iswiidhan timid sanadkii 2015-ka, ayaa heesata sharciga ku meel gaarka ah, waxaana la filayaa in marka uu ka dhaco ay cuusbooneysiinsan doonto.